धुर्बराज वली ( धुर्बजी )
एक युवा, एक विद्यार्थी, एक सामाजिक अभियान्ता, अनी एक सल्यानबासी आम नेपाली !
मेरो बारेमा !
गेट निर्माणमा प्रत्यक्ष रुपमा खटिएरै काम गर्ने युवाहरुको घोषणा !
सल्यान गेट निर्माण अभियानमा प्रत्यक्ष गेट निर्माण स्थलमा खटिएर काम गर्न चाहने सल्यानी युवाहरुको नाम संकलन हुँदै छ । अबको तीन महिना पछी नेपालमा फर्केर सल्यानमै रहनु हुने बिदेशी युवा साथीहरु साथै सल्यानमै पहिलेदेखी रहनुहुने सल्यानी युवालाई साथीहरुलाई यस अभियानमा अभियन्ताको रुपमा प्रत्यक्ष लाग्न अनुरोध । निर्माण स्थलमा खटिन चाहनुहुने युवा साथीहरुले तलको कमेन्ट बक्समा कमेण्ट गरिदिन अनुरोध ।
बेरोजगार हुनु हुने नेपाली दाजुभाइहरुको संख्या बढ्दै पो छ त - सरकार !
नेपालमा फेरी पनि बेरोजगार नेपाली दाजुभाइहरुको केही आकडा प्रस्तुत हुँदै छ । म्यादी प्रहरीको फारम भर्नेहरु जती सबै बेरोजगार हुन । रोजगार नपाएर म्यादी प्रहरीको जागीर भए नि खान तयार ।
सल्यान गेटको सपना पुरा गर्न ७ लाख भन्दा बढि रकमको प्रतिबद्धता !
अनलाइन तहल्का चैत्र १३, सल्यान । देख्नेहरुका सपना पुरा हुन्छन । सपना नै नदख्नेले के काम गर्छ र ? सल्यानका युवाहरुले एउटा सुन्दर सपना बोकेका छन । जुन सपना हो सल्यान प्रवेश गर्नेहरुलाई स्वागत गर्न र छोडेर जानेलाई विदाइ गर्ने सिमा गेट निर्माण । त्यहि सपना पुरा गर्नका लागि फेसबुकमा चलाइएको अभियानमा लाखौ रकम सहयोगको लागि प्रतिवद्धता जाहेर भएको छ । सल्यान गेट निर्माणका लागि ७ लाख १ हजार ३ सय नव्वे रुपैयाँ रकम सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता प्राप्त भएको अभियानका संयोजक ध्रुवराज वलीले जानकारी दिएका छन । हाल भारतको बैंग्लोरमा रहेका वली लगायतका युवाले चलाएको फेसबुक पेजबाट चलाइएको अभियान अन्तरगतको ७४ हजार २ सय पाँच रकम प्राप्त भैसकेको जनाएका छन । कपुरकोट नजिकै दाङ र सल्यानको सिमानामा गेट निर्माण गर्ने गरि अभियानको शुरुवात गरिएको हो । सपना ध्रुवले देखेपनि उनिसंगै देश तथा विदेशमा रहेका सयौं नागरिकले सपना पुरा गर्ने अभियानमा लागेका छन । सपनामा देखेजस्तै गेट, गेटमा सल्यानको पहिचान झल्कने तस्विरहरु, छेउमा आकर्षक मन्दिर अनी टुरिष्ट प्रवेश गर्न लागेको गाडि पनि आहा सुन्दैमा मनमोहक हुने एकपटक सबैले हेर्नैपर्ने स…
चिन हाम्रो एउटा असल छिमेकी मात्रै हो !
- धुर्बराज वली
यतीबेला हाम्रा देशका प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणको क्रममा हुनुहुन्छ । उहाँको चीन भ्रमण उपलब्धीमुलक बनोस र राष्ट्रका निम्ति हितकर बनोस हार्दिक कामना । प्रधानमन्त्री ज्युको चीन भ्रमण प्रोटोकलको ख्याल राख्दै एक असल छिमेकीको हैसियतको रहोस । 'चिनले दिने र नेपालले लिने' तर्फमात्र भ्रमण केन्द्रित नहोस । दुबै देशको हितमा हुने सम्झौताहरु - उर्जा सम्झौता,ब्यापार सम्झौता,लगानी सम्झौता जस्ता कुरामा नै बढी केन्द्रित रहोस । अनि चिनले भर्खर भर्खरै नेपालीहरुलाई इस्यु गरेको ग्रीनकार्ड र ग्रीनकार्ड होल्डरहरुको अबस्था बुझ्ने अबसरको रुपमा पनि यो भ्रमण केन्द्रित बनोस । साथै हाम्रो नेपाली भुमी `लिपुलेक´को बारेमा चिनिया उच्च ब्यक्तित्वहरुसँग उचित जबाफ माग्न सक्नेसम्मको हिम्मतको बनोस - कामना ! ...............................................
हाम्रा दुई ठुला छिमेकीहरुमध्य हामी नेपालीहरुको चिनप्रतीको पोजेटिभिटी पक्कै पनि बढी छ । भारतको नाकाबन्दी पछि झन यो पोजेटिभिटी बढेको कुरा प्रष्ठ छ । यसैकारण चिनले जे गरे पनि राम्रो राम्रो जस्तो देखिने । जे दिएनी राम्रो राम्रो जस्तो लाग्ने गर्छ - हामीहरु…
जुट्दै छ सहयोग रकम !
सल्यान गेट निर्माण अभियान अन्तर्गतको आर्थिक संकलन अभियानमा झन्डै रु.९,१३,०७४/- रकम सहयोगको प्रतिबद्दता प्राप्त भयो । ............................. 'सल्यान गेट' निर्माण गर्ने हामी सल्यानी युवाहरुको अभियानमा उत्साहपूर्ण साथ र सहयोग प्राप्त हुँदै छ । यस अभियानमा हालसम्म रु.९,१३,०७४/-रकम सहयोग गर्ने प्रतिबद्द्ता प्राप्त भएको छ । जसमध्य रु.८२,०४४/- प्रतिबद्दता अनुरुप हामीलाई रकम प्राप्त भइसकेको छ । प्रतिबद्द्ता जनाउनु हुने ब्यक्ती र उहाले दिने रकम यस प्रकार रहेको छ ।
(नोट : प्राप्त भइसककेको रकमको पछाडी प्राप्त लेखिएको छ् ।)
१) ॠषि अधिकारी ( हाल काठमाण्डौ , प्रधानमन्त्रीको परराष्ट्र मामला सल्लाहकार ) -रु.१५,०००/- २) ॠषिकेश जङ्ग शाह ( युवा नेता ) - रु.१०,०००/- ३) धुर्बराज वली ( यस अभियानका अभियान्ता ) -रु.१०,०००/- ४) पवित्र चन्द ( सल्यान साउनेपानी , हाल: मलेसिया )-रु.७,५००/- ५) रत्न चन्द ( हाल सल्यान) रु.५५५५/- ६) बिमला बुढाथोकी ( श्रीनगर,सल्यान )-रु.५५५०/- (प्राप्त) ७) राजकुमार केसी (शा.न.पा.-५, रानीकाेट ,हाल :काठमाण्डाै )-रु.५५५०/- (प्राप्त) ८) २०५५ सालमा दिबङ्गत हुनुभएका हिवल्च…
©Dhurvaraj ( 2017 )
तिमी मलाई आफ्नो नजिक खिच म तिम्रो तस्बिर खिचेर मनमा कैद गर्छु ! 😉
सल्यान गेट निर्माण अभियान बिशेष9
सल्यान बिशेष चासो6
सल्यान टुरिजमप्रतीको मेरो चासो3
साहित्यमा टुकुटुकु हिड्दै गर्दा फुरेका केही रचनाहरु3
सत्यको खोजीमा - भाग १1
मेरा हालसम्मका पोस्टहरु
फेसबुकमा म !